China Arọ Ọrụ Thickened na-abụghị Woven Aeration Fabric ite osisi tolite akpa ụlọ ọrụ na-emepụta |Zhengwei
Akpa na-eto eto 001
Akpa na-eto eto
Eco-enyi na enyi, Ogo dị elu, mpịachi
Felt toro bag is a breathable fabric plant container,kpuchie na ikuku oghere nke na-enye ohere mgbọrọgwụ iku ume na-eto eto ike, ọzọ ikuku iru osisi mgbọrọgwụ, mma drainage na-mgbọrọgwụ usoro si ekpo oke ọkụ ma ọ bụ overwatering.And chere ákwà nwere ụfọdụ mmiri. absorption, na-edebe ala mmiri mmiri, ọ na-edobe nguzozi n'etiti ikuku, ala na mmiri. Na-eme ka osisi na-ekpo ọkụ n'oge oyi na oyi na okpomọkụ.
1) Akpa Felt Grow na-ejikarị eme akwụkwọ nri, ifuru, osisi, wdg.
2) Akpa na-eto eto kwesịrị ekwesị maka griin haus, ugbo, ubi, wdg, Ọ dị mma ilekọta.
3) Ị nwere ike ịkụ osisi na nnukwu nha na-eto akpa ozugbo, ọ dịghị mkpa ịkụnye n'okpuru ala, dị mfe transplant, ọ nwere ike ịbawanye nchebe nke mgbọrọgwụ osisi.
* Nhazi pụrụ iche: Akpa nduku ọ bụla nwere windo nhụta.
* Ọ dị mfe ịkwaga: nwere aka siri ike na-enye gị ohere ịkwaga ya ngwa ngwa.Akpa nduku zuru oke maka patios, obere ubi, mbara ihu, ime ụlọ anwụ na oghere ime ụlọ / n'èzí ọ bụla.Enwere ike iji ha na nduku, eyịm, taro, radish, karọt na akwụkwọ nri ndị ọzọ.
* Ihe na-adịgide adịgide na Reusable: Ejiri akwa na-eku ume, nke na-adị mma gburugburu ebe obibi.Dị fechaa na nke siri ike, enwere ike iji ya mee ihe ruo ọtụtụ afọ.Enwere ike ịpịaji ma chekwaa ya n'oge enweghị ọrụ.A na-ejikwa ya dị ka akpa nchekwa, dị ka itinye uwe ruru unyi, bukọta ngwá ọrụ ect.
* Ahụike: akwa na-eku ume, na-agbanwe agbanwe.
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ahaziri nha dị.
Anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa na-ere Amazon , akara FBA , barcode , ntuziaka , na ịdọ aka ná ntị niile nwere ike ịdị.
Nke gara aga: Ajị na-ekpo ọkụ na-ebugharị ebugharị na-ebugharị ute zuru oke maka ịgbanye ihe mgbochi
Osote: Akpa mmetụta dị elu nwere akpa mbupu tote akpa ejiji ejiji nnukwu akpa nchekwa ikike
1 galọn osisi akpa
Akpa ákwà Osisi na-eto eto
Nduku echetara na-eto akpa
Akpa na-eto eto Maka akwukwo nri
Akpa na-eto eto anaghị akpa
Akpa na-eto akwụkwọ nri
Ejiji akwalite Recycled emetụtara akpa omenala lo...
Omenala mbukota akpa onyinye mbukota echere na-echekwa Ba...
Akwa mmetụta dị elu na n'ùkwù
1/2/3/5/7/10 Galọn ákwà ite maka atụmatụ ubi...
Ejiji Felt Ejiji / Okwu faịlụ / Akwụkwọ Ba...